‘को हो त्यो’ भन्दै आइन् रानी : RajdhaniDaily.com -
Home कला ‘को हो त्यो’ भन्दै आइन् रानी
‘को हो त्यो’ भन्दै आइन् रानी
काठमाडौं । ‘को हो त्यो’ बोलको गीती भिडियोसहित गायिका रानी शाक्य दर्शकमाझ आएकी छन् । भिडियोलाई जीवन शाहीले निर्देशन गरेका हुन् । एक युवतीले आफूलाई मनपर्ने मान्छेले सपनामा आएर सताएको र निद्रा चोरी लगेको वर्णन भिडियोमा गरिएको छ ।
शब्द गोविन्दप्रसाद उपाध्याय र संगीत विक्रम थापाको गीतलाई विशन मानन्धरले संयोजन गरेका छन् । सुबल थापाको कोरियोग्राफीमा एलिशा शर्मा र कमल सिंह देख्न सकिने भिडियोमा नवराज उप्रेतीको छायांकन र नवीन निरौलाको सम्पादन छ । अमेरिका बस्दै आएकी गायिका शाक्य चिकित्सक हुन् । यसअघि उनका ‘मेरो प्रियतम’, ‘हरपल तिम्रो’, ‘यो वैशको मात’, ‘सुरुवात’, ‘पहिलो माया’, ‘कथा’लगायत आइसकेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘प्रसाद २’ मा पनि विपीन, नम्रता र निश्चल नै
संगीतकार मधु क्षेत्री, ओम कर्माचार्य, न्ह्यू बज्राचार्य, बिक्रम थापाकलगायतका संगीतमा स्वर दिइसकेकी शाक्य अमेरिकामा रहेर पनि नेपाली संगीत क्षेत्रमा क्रियाशील छिन् । गायिका शाक्यले आफ्नो नयाँ म्युजिक भिडियोलाई माया गरिदिन श्रोता÷दर्शकसँग आग्रहसमेत गरेकी छन् ।
काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा ८८ जनामा कोरोना भाइरसका संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या दुई लाख ७३ हजार...
Breaking News सीपी लोहिया - February 19, 2021
प्रधानमन्त्रीसँग फुरुंग भए बालबालिका
राजधानी समाचारदाता - January 2, 2021
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार बालबालिकासँग लामो अन्तक्र्रिया गर्दै बालबालिका धर्तीको भविष्य भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बालबालिका आफ्नो मुटुको धड्कन...
वनको रकममा वडाध्यक्ष र सचिवद्वारा हिनामिना
भक्तबहादुर शाही - June 22, 2020
दैलेख । चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका –६ का वडाअध्यक्ष र सचिवको मिलेमत्तोमा वन उपभोक्ता समितिको रकममा अनियतिता भएको छ । नगरपालिकाले नगरलाई हरियाली वनाउने उद्देश्यले ६...
भर्खरै प्रकाश सिलवाल/रासस - September 11, 2020
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठकमा छताछुल्ल भएको आन्तरिक विवाद अन्ततः सोही कमिटीको बैठकबाट अन्त्य भएको छ । प्रधानमन्त्री...
निषेधाज्ञा खुकुलो हुने, जोर बिजोर प्रणाली लागु गर्न सुझाव
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - September 9, 2020
काठमाडौं । उपत्यकाका तीन जिल्लामा निषेधाज्ञा आंशिक खुकुलो हुने भएको छ । लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तनवारे अनुमोदनका लागि मंगलबार तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृहमन्त्रालयमा...
समाजमा मिडियाको भूमिका
बिचार कुमार अभिनव - August 20, 2020
सञ्चारमाध्यमबाट समाचार, जानकारी, विचार आदि प्रवाह गरिन्छ । सञ्चारमाध्यमलाई विश्वमा सबैभन्दा प्रभावशाली अस्त्रका रूपमा लिइन्छ । यसलाई सरकारको चौथो अंगको रूपमा पनि लिइन्छ ।...
Breaking News विश्वनाथ सिम्खाडा - July 29, 2020
नेरा माबि सिमराले शुरु गर्यो कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम
प्रदेश २ राजधानी समाचारदाता - October 2, 2020
सिमरा । बाराको जीतपुसिमरा उपमहानगरपालीका २ मा रहेको श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिद्यालयले कक्षा ११ को नयाँ पाठयक्रम शुरुवात गरेको । कोभिड १९ को प्रभावमा...
हुमाकान्त पोखरेल - February 18, 2021
रबिन कटेल - February 19, 2021